Faahfaahino kasoo baxay weerarro Al-Shabaab geysteen | KEYDMEDIA ONLINE
Faahfaahino kasoo baxay weerarro Al-Shabaab geysteen
Kooxda Al-Shabaab ee dagaalka kula jirta dowladda Soomaaliya ayaa saakay qaadday weerarro kala duwan kuwaasoo kakala dhacay saddex deegaan oo ka tirsan Galmudug iyo Koonfur Galbeed.
MUQDISHO, Soomaaliya - Kooxda Al-Shabaab ayaa fulisay saddex weerar oo kakala dhacay degaanno kala duwan oo hoos taga Galmudug iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya. Bariirre iyo Awdheegle oo ka tirsan Gobolka Shabeelha hoose iyo Sina-dhaqo oo ka tirsan Gobolka Galgaduud ayey ka dhaceen weerarrada.
Weerarrada ayey kooxda Al-Shabaab ku dileen laba abaanduuliye oo kala hoggaamineysay ciidamda dowladda ee weerarka loo geystay, AUN Captain Abdirashid Mohamed Nur oo kamid ahaa saraakiishii hogaamineysey ciidankii ay Shabaab kusoo weerareen Bariire iyo Awdhegle ayaa ku geeriyooday weerarka hore ee lala eegtay ciidamdadii ku sugnaa saldhigga Bariire ee weerarka lagu qaaday.
Dagaalka Bariirre ayaa la sheegay in uu qasaare xoog leh gestay, kooxdii weerarka soo qaadday ee Al-Shabaab ayaa la sheegay in ay la wareegeen gacan ku haynta saldhigga, ku dhawaad 40 qof ayaa ku dhimatay dagaalka, ciidamo gurmada ah oo ka baxay magaalda Muqdisho ayaa goobta gaaray, waxaana gacan ku heynta goobtii lagu dagaalay la wareegay ciidamda Dowladda gaar ahaan kumaandoosta Gorgor.
Sidoo kale Abaanduulihii ururka 71-aad, Guutada 15-aad ee Qaybta 21-aad Dhamme: Sayid Bicir ayaa isna lagu dilay dagaal u dhexeeya Ciidamada Xoogga iyo Kooxda Al-Shabaab oo ka dhacay degaanka Sina-dhaqo ee Koonfurta Magaalada Dhuusamareeb. Weerarka waxaa lagu laayay qaar kamida ciidamadii kooxda, waxaana sidoo kale qasaaro uu soo gaaray ciidamdii XDS ee la bar-tilmaameedsaday.
Kooxda Shabaab ayaa inta badan ka faa'iideysata xilliga kala guurka, waxayna inta badan weeraraan saldhigyada ciidamda, iyagoo ka faa'iideysanaya saraakiisha ciidamda ee siyaasadda ku milmay, shaqadoodiina hakiyay, waxayna kooxdu qaaddaa xilliyadan oo kale weerarro toos ah oo lagu bar-tilmaameedsanayo xarumaha ciidamda ee deegaanada kala duwan.